November 22, 2017 अम्बिका अन्तरबार्ता, फिचर स्टोरी, मुख्य खबर
नेपाली राजनितिमा निकै चर्चीत नाम हो, देवेन्द्रराज कण्डेल ( मुन्ना बाबु ) । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु मध्ये कण्डेलको नाम पनि शिर्षस्थानमा मानिन्छ । बोनस लाईफमा बाँचीरह्नु भएका नेता कँण्डेल बहुदलीय ब्यवस्था स्थापनाका लागि विद्यार्थी जीवनबाटै संघर्ष गर्नु भएको थियो । राजनीतिमा नै जीवन समर्पण गर्नु भएका नेता कँडेेेलको जीवन संघर्षपूर्ण छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म राम्रो पकड बनाउनुभएका कण्डले यतिबेला प्रतिनिधी सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहन्छ ।
यस निर्वाचन क्षेत्रमा उँहाको राम्रो प्रभावसमेत देखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि उँहाको आफ्नै घर रहेको रमपुरवाँ सिमा नाकासम्म फैलिएको यस निर्वाचन क्षेत्रमा कण्डेलको निकै पकड भएको क्षेत्र मानिन्छ । यस अगाबैको दुई दुई पटकसम्म सोही क्षेत्रबाट निर्वार्चीत भई दुई पटक गृह राज्य मन्त्री हुदा कण्डेलले गरेको कामले राष्ट्रिय चर्चा पाएको हो । कण्डेलले द्धन्द्धकालमा गृह राज्य मन्त्रीको भुमीकामा रहदा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थामा माओबादीका शिर्ष नेताहरुको टाउकोको मोल तोकेर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा कण्डेल एकाएक चर्चामा आउनुभएको थियो ।
सोही काम गरेर चर्चामा आउनुभएका कण्डेललाई सोही बखत द्धन्द्ध कालमा तत्कालीन माओबादीबाट १७ राउण्ड गोली प्रहार भई आक्रमणको प्रयास भएको थियो । यद्यपी मृत्युलाई समेत जितेर कण्डेल भाग्यले बाच्न सफल हुनुभयो । यद्यपी कण्डेललाई त्यो बेला लागेको गोलीहरु मध्ये एउटा गोलीअझै पनि छातीमा छ ।
वि.सं २०१३ चैत्र १४ गते बुवा पृथ्वीराज कँण्डेल र आमा धनदेवी कँण्डेलको कोखबाट जन्मीनु भएका नेता कण्डेलको जीवनपनि संंघर्षपूर्ण छ । अहिलेसम्मको आफ्नो पूर्ण राजनीतिमै बिताउनु भएका नेता कण्डेल विद्यार्थी जीवनमा पढाईसँगै खेलमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो । शैक्षिक योग्यताको हिसाबले उँहाले स्नातक तह पूरा गर्नुभएको छ । अन्तराष्ट्रिय हकी खेलाडी भएर पनि नेपाल र भारतको समेत खेल जगतमा योगदान दिनुभएको छ । तर कण्डेलकी हजुरमुवा साथै बुवा पृथ्वीराज कँण्डेलको राजनीतिक जीवनबाट अत्यन्त प्रभावित नेता देवेन्द्र पढाई र खेललाई विद्यार्थी जीवनमै बिट मार्नुभयो । उँहाको बुवा पृथ्वीराज नेपालको पहिलो जन निर्वाचन २०१५ मा सांसद समेत रह्नु भएको थियो भने उहांको उजुरमुवामा पनि पुर्व सांसद हुनुहुन्थ्यो । नेपालको पहिलो जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्री र नेपालको २२ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा रह्नु भएको विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको सरकारमा उँहाको बुवा पृथ्बीराज कण्डेलले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । तर नेता देवेन्द्रराज कण्डेलले भने औपचारिक राजनीति २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा भएपछि अन्यन्तै सक्रियताका साथ बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार अभियानमा लागेर सुरु गर्नु भएको हो । तत्पश्चात नेपाल विद्यार्थी संघमा लागेर नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नु भएका कण्डेल बहुदलीय ब्यवस्थामा साविक बडहरा दुबौलिया गाविसमा दुईपटक अध्यक्षमा समेत भारी मतले बिजयी हुनु भएको थियो ।
यस्तै सुनवल नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुखमा एमालेका उमेदवार बिजयी भएका छन् । यस्तै सरावल गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा नेपाल लोकतान्त्रीक फोरम बिजयी भएको छ । तर उक्त गाउँपालिकाको फोरमका अध्यक्ष सहित फोरम नवलपरासीनै कांग्रेसमा बिलय भएको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसलाई अहिलेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सकस नहुने देखिन्छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा बाम गठबन्धनबाट उमेदवारी दिएका माओबादी केन्द्रका जिल्ला ईन्चार्ज घनश्याम यादव र राजपाका केन्द्री उपाध्यक्ष गोबिन्द चौधरी उँहाको प्रतिद्धन्द्धी हुनुहुन्छ । तर मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेस र बाम गठबन्धन बिच नै प्रतिस्पर्धा हुने मतदाताहरुको आंकलन छ । तर कडेल भन्छन् मेरो प्रतिस्पर्धी नै छैनन् ।
नवलपरासी सुस्ता पश्चिम प्रतिनिधि सभा २ का उम्मेद्वार एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्रराज कंडेलसंग आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर गरीएको कुराकानी ।
अहीलेको बाम गठबन्धनसंग चुनावी मैदानमा आउंदा नेपाली कांग्रेसलाई कस्ता चुनौतिहरु देख्नु भएको छ ?
मेरो विचारमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको यो चुनाव केन्द्रित गठबन्धन जसलाई बाम गठबन्धन भनिएको छ । यो केवल मतदातालाइ झुक्याउने खेल मात्र हो, चुनाब पछि यी दुई पार्टी एकीकरणको कुनै सम्भावना छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण सम्भव छैन भन्नु भयो किन नि, ?
बाम गठबन्धनसंग चुनावी मैदानमा होमिदा चुनाव जित्न तपाईलाई निकै चुनौति छ भन्छन् नि ?
तपाईले त अचम्मको कुरा पो गर्नु भयो त, बाम गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य घनश्याम यादव हुनुहुन्छ । उहांसंग तपाइैको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुदैन ?
हो तपाईले भनेको कुरा एकदमै सही छ । मसंग चुनावी मैदानमा अहीले बाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता घनश्याम यादव हुनुहुन्छ । र यहांसंग मेरो चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुदैन किनकी उहां नवलपरासी जिल्ला निवासी नै होइन र नवलपरासी जिल्लामा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका धेरै साथिहरु हुदाहुदै रुपन्देहीबाट आएर नवलपरासीमा चुनावी मैदानमा हुमीनु भएको छ । उहां त हाम्रो जील्लाको अतिथि हो, र अतिथिसंग मेरो प्रतिस्पर्धा हुदैन र छैन पनि ।